N'ime ọha mmadụ taa, mkpa ọ dị ịbụ nnabata abụrụla nke dị mkpa. Nkwenye sitere na ngwaa Bekee 'irube isi' ma putara 'iru ma obu nogide'. Site na usoro iwu, nnabata pụtara irubere iwu na usoro dị adị. Nke a dị ezigbo mkpa maka ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ọ bụla. Ọ bụrụ na anaghị agbaso iwu na ụkpụrụ ndị metụtara ya, gọọmentị nwere ike itinye ndị mmadụ n'ọrụ. Nke a dị iche na mma nchịkwa ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ ntaramahụhụ na iwepu ikike ma ọ bụ mmalite nyocha mpụ. Agbanyeghị na nnabata nwere ike ị metụtara iwu na ụkpụrụ niile dị ugbu a, na afọ ndị gara aga, nnabata esorola rụọ oke na iwu ego na iwu nzuzo.
Nrube isi n'ime iwu nzuzo abụrụla ihe dị mkpa n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Nke a bụ n'ihi na General Data Protection Regulation (GDPR), nke malitere na 25 Mee 2018. Kemgbe ụkpụrụ a, ụlọ ọrụ ga-agbaso iwu siri ike ma ụmụ amaala nwere ikike ndị ọzọ gbasara data onwe ha. Na nkenke, GDPR na-emetụta mgbe nzukọ haziri data nkeonwe. Ozi nkeonwe na-ezo aka na ozi ọ bụla metụtara onye ekere eke ma ọ bụ nke amata. Nke a pụtara na ozi a na-emetụta mmadụ kpọmkwem, ma ọ bụ nwee ike ịchọta ya na onye ahụ. Ihe fọrọ nke nta ka nzukọ ọ bụla nwee banyere nhazi nke data onwe. Nke a bụrịrị ikpe, dịka ọmụmaatụ, mgbe a na-ahazi nchịkwa ụgwọ ma ọ bụ mgbe echekwara data ndị ahịa. Nke a bụ n'ihi nhazi nke data onwe onye gbasara ndị ahịa yana ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Ọzọkwa, ọrụ nke irubere GDPR metụtara ụlọ ọrụ yana ụlọ ọrụ mmekọrịta dịka klọb egwuregwu ma ọ bụ ntọala. Ya mere, obosara GDPR di nnabata. Ndị ọrụ nchekwa data onwe bụ ngalaba nlebanyere anya na irubere GDPR. Ọ bụrụ na nzukọ anaghị agbaso, Ọrụ Na-ahụ Maka Ọnọdụ data nwere ike ịmanye ntaramahụhụ, yana ihe ndị ọzọ. Iwu ego ndị a nwere ike iru puku kwuru puku euro. Ya mere nnabata na GDPR di nkpa maka nzukọ obula.